တရုတ်ဈေးကွက်မှာ စဖြန့်တဲ့ Galaxy Fold တွေအားလုံး ၅ မိနစ်အတွင်း ရောင်းကုန်ခဲ့ကြောင်း ကြွားလုံးထုတ်ခဲ့တဲ့ Samsung - MyMedia
တရုတ်ဈေးကွက်မှာ စဖြန့်တဲ့ Galaxy Fold တွေအားလုံး ၅ မိနစ်အတွင်း ရောင်းကုန်ခဲ့ကြောင်း ကြွားလုံးထုတ်ခဲ့တဲ့ Samsung
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတုန်းကပဲ Samsung ရဲ့ CEO DJ Koh က ဆိုးလ်မြို့ Samsung AI ဖိုရမ်မှာ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ လာမယ့်နှစ်အတွင်း Foldable ရောင်းအား သိသိသာသာ တိုးလာဖို့ ပစ်မှတ်ထား ကြိုးစားနေတယ်လို့ အသိပေးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ Foldable flip ဖုန်းအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ W20 5G ကိုလည်း တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဖြန့်ချိဖို့ ပြင်ဆင်နေတာပါ။
မူလပထမ Foldable ဖုန်းဖြစ်တဲ့ Galaxy Fold က တော့ တရုတ်နိုင်ငံဈေးကွက်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဖြန့်ချိခဲ့ပါပြီ။ အားနည်းချက်တွေရှိခဲ့လို့ ဖြန့်ချိမယ့်ရက်ကို ရွှေ့ဆိုင်းပြီး ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်သတ်မှတ်ပြီးမှ ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် Galaxy Fold အတွက် ဝေဖန်သံတွေကတော့ တိတ်ဆိတ်သွားခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ရောင်းအားကျဆင်းသွားတာကိုလည်း မတွေ့ရပါဘူး။
Foldable ဖုန်းဈေးကွက်အတွက် အဓိကပြိုင်ဘက်ကြီးဖြစ်တဲ့ Mate X ရဲ့ မိခင်မြေမှာ Galaxy Fold ရဲ့ ပထမဆုံး ဖြန့်ချိမှုဟာ မျက်နှာပန်းလှခဲ့တယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ ကုမ္ပဏီရဲ့ ဝီဘိုအကောင့်မှာ ဖော်ပြချက်အရ $2,000 ကျော်နဲ့ ရောင်းချခဲ့ရာမှာ ၅ မိနစ်မပြည့်ခင်မှာပဲ Galaxy Fold ယူနစ်တွေအားလုံး ကုန်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယား ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးဟာ Galaxy Fold အလုံးရေ ဘယ်လောက်ကို တရုတ်ဈေးကွက်မှာ ရောင်းချခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ ဖော်ပြခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အရေအတွက်က ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး မြင့်မားခြင်း မရှိနိုင်ဘူးလို့ပဲ ယူဆရပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Mate X ရဲ့ နယ်မြေမှာ အခုလို ကြွားလုံးထုတ်လိုက်တာကတော့ Huawei ကို တပ်လှန့်လိုက်သလိုပါပဲ။
တရုတျဈေးကှကျမှာ စဖွနျ့တဲ့ Galaxy Fold တှအေားလုံး ၅ မိနဈအတှငျး ရောငျးကုနျခဲ့ကွောငျး ကွှားလုံးထုတျခဲ့တဲ့ Samsung
ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးတုနျးကပဲ Samsung ရဲ့ CEO DJ Koh က ဆိုးလျမွို့ Samsung AI ဖိုရမျမှာ ကုမ်ပဏီအနနေဲ့ လာမယျ့နှဈအတှငျး Foldable ရောငျးအား သိသိသာသာ တိုးလာဖို့ ပဈမှတျထား ကွိုးစားနတေယျလို့ အသိပေးပွောဆိုသှားခဲ့ပါတယျ။ ကိုရီးယားကုမ်ပဏီဟာ လကျရှိအခြိနျမှာ Foldable flip ဖုနျးအမြိုးအစားဖွဈတဲ့ W20 5G ကိုလညျး တရုတျနိုငျငံမှာ ဖွနျ့ခြိဖို့ ပွငျဆငျနတောပါ။
မူလပထမ Foldable ဖုနျးဖွဈတဲ့ Galaxy Fold က တော့ တရုတျနိုငျငံဈေးကှကျမှာ ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ ဖွနျ့ခြိခဲ့ပါပွီ။ အားနညျးခကျြတှရှေိခဲ့လို့ ဖွနျ့ခြိမယျ့ရကျကို ရှဆေို့ငျးပွီး ဒုတိယအကွိမျ ပွနျလညျသတျမှတျပွီးမှ ဖွနျ့ခြိခဲ့တာဖွဈပမေယျ့ Galaxy Fold အတှကျ ဝဖေနျသံတှကေတော့ တိတျဆိတျသှားခွငျး မရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့လညျး ရောငျးအားကဆြငျးသှားတာကိုလညျး မတှရေ့ပါဘူး။
Foldable ဖုနျးဈေးကှကျအတှကျ အဓိကပွိုငျဘကျကွီးဖွဈတဲ့ Mate X ရဲ့ မိခငျမွမှော Galaxy Fold ရဲ့ ပထမဆုံး ဖွနျ့ခြိမှုဟာ မကျြနှာပနျးလှခဲ့တယျလို့ ဆိုရပါမယျ။ ကုမ်ပဏီရဲ့ ဝီဘိုအကောငျ့မှာ ဖျောပွခကျြအရ $2,000 ကြျောနဲ့ ရောငျးခခြဲ့ရာမှာ ၅ မိနဈမပွညျ့ခငျမှာပဲ Galaxy Fold ယူနဈတှအေားလုံး ကုနျဆုံးသှားခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
တောငျကိုရီးယား ထုတျလုပျရေးလုပျငနျးကွီးဟာ Galaxy Fold အလုံးရေ ဘယျလောကျကို တရုတျဈေးကှကျမှာ ရောငျးခခြဲ့တယျဆိုတာကိုတော့ ဖျောပွခွငျး မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အရအေတှကျက ပုံမှနျထကျပိုပွီး မွငျ့မားခွငျး မရှိနိုငျဘူးလို့ပဲ ယူဆရပါတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ Mate X ရဲ့ နယျမွမှော အခုလို ကွှားလုံးထုတျလိုကျတာကတော့ Huawei ကို တပျလှနျ့လိုကျသလိုပါပဲ။
The post တရုတ်ဈေးကွက်မှာ စဖြန့်တဲ့ Galaxy Fold တွေအားလုံး ၅ မိနစ်အတွင်း ရောင်းကုန်ခဲ့ကြောင်း ကြွားလုံးထုတ်ခဲ့တဲ့ Samsung appeared first on MyTech Myanmar.
MyMedia2019-11-08T19:45:14+06:30November 8th, 2019|MYTECH MYANMAR|
၂၀၂၀ အတွင်းမှာ Flagship အနည်းဆုံးလေးလုံး ထုတ်လုပ်သွားမယ့် Sony Xperia
AIA Myanmar မှ နှဈတဈရာပွညျ့အထိမျးအမှတျအဖွဈ “AIA GO! FOR LIGHT” အမညျရ ၅ ကီလိုမီတာရှိ ပရဟိတအပွေး ပွိုငျပှဲကို ပုဂံတှငျ ကငျြးပ
Snapdragon 730G ပါမယ့် Redmi Note 8 Pro မထွက်ဘူးလို့ ကုမ္ပဏီပြော
2019 Stevie International Business Awards ဆုခြီးမွှငျ့ပှဲ အခမျးအနားတှငျ အူရီဒူးမှ ဆုတံဆိပျ အရအေတှကျ ၁၄ ဆုအား ဆှတျခူးရရှိခဲ့
5G ပါမယ့် Redmi K30 ကို နောက်နှစ် အစောပိုင်းမှာ မြင်တွေ့ရမည်
Snapdragon 665 SoC အသုံးပြုထားမယ့် Realme 5s
Burmese Ghouls အသင်း စတုတ္ထနေရာနဲ့ ကျေနပ်လိုက်ရတဲ့ MLBB M1 Championship
ထွက်ရှိရက်နီးကပ်လာတဲ့ Vivo S1 Pro အတွက် Specs တွေ သိရပြီ
ဒုတိယမြောက် Foldable စမတ်ဖုန်းအတွက် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ Samsung
MYTECH အမေး၊ အဖြေ ကဏ္ဍ (အပိုင်း-၂၇)
ဒီတပတ် စမတ်ဖုန်းလောကမှာ ဘာတွေထူးခြားသွားလဲ (အပတ်စဉ်-၄၆)
Lenovo Z6 Pro 5G အတွက် အပြာရင့်ရောင် ထွက်လာပြီ
error: Alert: Copyright © 2019. MyMedia Myanmar